Khasaaraha Weerarkii Shalay Kadhacay Huteel Ampasador Ee Magaalada Muqdisho | Berberatoday.com
Khasaaraha Weerarkii Shalay Kadhacay Huteel Ampasador Ee Magaalada Muqdisho
Muqdisho(Berberatoday.com)-Inta la ogyahay 15 qof ayaa ku dhintay 50 kalena way ku dhaawacmeen qarax iyo weerar lagu qaaday Huteel Ampasador ee magaalada Muqdisho.
Laba xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ayaa ku dhintay weerarkaasi lagu qaaday Huteelka, waxaana la sheegayaa in laga badbaadiyo xildhibaano kale oo deganaa huteel Ampasador.
Dhaawaca ayaa lagu daweynayaa cisbitaalada magaalada Muqdisho iyadoo la sheegayo in xaalada caafimaad ee dadkaasi ay aad u liidato.sidoo kale waxaa la sheegaya in saaka huteelka gudihiisa laga helayo dhaawacyo kale maadaama uu huteel soo gaadhay burbur xoogani.
Xarakada Alshabaab ayaa sheegatay qaraxan lagu qaaday Huteel Ampasador iyadoo kusoo beegmaysa xili shalay dawlada Somaliya sheegtay inay dishay Sheekh Dulyadeyn oo ka mid ahaa saraakiisha Alshabaab.
Wasiiro ka tirsan dawlada Somaliya iyo taliyaha ciidanka Nabadsugida oo xalay warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada somaliya ka hortageen khasaare badan oo ay gaysan lahaayeen maleeshiyada Alshabaab, iyagoo sidoo kale sheegay in la toogtay saddexdii nin ee weerarka soo qaaday.
Magaalada Muqdisho waxaa inta badan kusoo noqnoqda weerarada lagu qaado huteelada iyadoo lagu soo beego qaraxyadaasi marka ay Somaliya ka jirto xaalad siyaasadeed oo kacsan ama qodobo ay isku mari laayihiin maamulka dawlada Federaalka Somaliya.